Pool Tournament Dr. Cue Pueblo Colorado│Sports News Headlines Global Articles WebSite.WS | Gvmg - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့
I’m sitting in the ‘Classic Q’ pool hall in Pueblo Colorado in between matches in this tough action pool tournament. It’s almost4PM and I have been here since 10:00 AM this morning. I was lucky and drewabye in the first round and then won my first match5ရန် 1afew minutes ago. There is definitely some tough action in this tourney. We have several players from Colorado Springs and Denver and then of course there is Dr. Cue (Tom Rossman) from out of state. This is the 13th annual Dr. Cue Pool Tournament. By far the biggest tournament in Pueblo and one of the bigger billiards tournaments in Colorado. I think there are 85 players this year which is one player more than last year. The format is 8 ball BCA rules. It’sarace to5on the winner side of the bracket andarace to4on the one loss side. We flipacoin to determine the break on the first game and then it is alternating breaks after that. နှင့် $40 entry fee, only the toughest shooters around get in. When you get an open shot, you better get out (run the rack), becauseasecond shot probably won’t happen. I always say, You miss, You lose. The pool tables all have new cloth and the one I played on was extremely fast. I missedatable run on the 3rd game because the cue ball rolled to far on the ball before the 8 leaving me hooked behind the 8. I hooked myself so good on that one that there was not evenagood bank angle to makeahit. I gave up ball in hand on that one but luckily my opponent hadacouple of clusters and was not able to break them out and clear the rack. I won the flip when the match started and began the match withabreak and run. My opponent had the next break and he answered withabreak and run. This wasasurprise because his cue ball rolled behind one of my balls and he could not see the 8 ဘောလုံး. He madeatable length Masse shot on the 8 ball to answer my run. This is definitelyafun pool tournament and I will be keeping you posted on the out come. သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကို Out ရန်, Ted Pool Tournament Dr. Cue Pueblo Colorado
ပြန်လည်သုံးသပ် Lay2lose – ကောင်းလားဆိုးလား?
Rex Grossman : 2003 နေ့ပုံမူကြမ်း
လက်နှိပ်ဓာတ်မီး: LED မီးရောင်ရွေးချယ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
အဘယ်အရာနှင့်အဘယ်မှာရှိတစ် ဦး ဘေ့ငါးဖမ်းလျှို့ဝှက်ချက်?
ဘေ့ငါးဖမ်းခြင်းလျှို့ဝှက်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိရန်ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်အရေးကြီးဆုံးအရာမှာဘေ့စ်သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်ငါးမျိုးကိုမဆိုဖမ်းရန်အတွက်တကယ့်လျှို့ဝှက်ချက်မရှိပါ။. တစ်ခုတည်းသောဘေ့ငါးဖမ်းလျှို့ဝှက်ချက်ကိုတကယ်မဆိုရှိမရှိသောကွောငျ့ဖွစျသညျ. အဲဒါအမှန်ပါပဲ… မည်သည့်ဘေ့စ်အမျိုးအစားအတွက်သင်ငါးဖမ်းနေသည်ကိုသိရန်အရေးကြီးသည်. ကွဲပြားခြားနားသောဘေ့စ်အမျိုးအစားများစွာရှိသည်, သေးငယ်တဲ့ပါးစပ်ဘေ့, အဖြူဘေ့, ဒါပေါ်မှာရေချိုရေဘေ့စ. သင်မည်သည့်ဘေ့စ်ငါးအားငါးဖမ်းနေသည်ကိုသိရှိပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်ငါးဖမ်းလှေ၏လျှို့ဝှက်ချက်ငါးစာကိုသင်သွားနိုင်သည်. PSST… ဒါကနည်းနည်းဘေ့ငါးဖမ်းလျှို့ဝှက်ချက်များတစ်ခုဖြစ်သည်… ဤဆောင်းပါးအတွက်ကျွန်ုပ်သည်အသုံးအများဆုံးဘေ့စ်အတွက်ငါးမျှားမည်, ကြီးမားတဲ့ပါးစပ်ဘေ့. ပါးစပ်ကြီးအတွက်ငါးဖမ်းခြင်း၏လျှို့ဝှက်ချက်မှာ၎င်းသည်၎င်း၏သဘာဝအရမည်သည့်အရာသည်စားသည်ကိုသိရန်ဖြစ်သည်. ၎င်းသည်သင်ကိုယ်တိုင်မေးမြန်းရန်ခက်ခဲသောမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပုံရသော်လည်းအဖြေမှာအတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်: ပါးစပ်ကြီးသည်ယင်ကောင်များမှငှက်ငယ်များအထိအရာရာကိုစားသည်, အခြေခံအားဖြင့်ရေကိုထိမိရင်ပါးစပ်ကြီးကစားလိမ့်မယ်. ဘေ့ငါးဖမ်းလျှို့ဝှက်ချက်အမျိုးအစား – သငျသညျကိုအသုံးပြုငါးစာဟာ angler ပေါ်တွင်မူတည်သည်, သင်အမှန်တကယ်ငါးစာကိုအသုံးပြုလိုပါကည crawlers များသည်ဘေ့စ်အတွက်ထူးခြားသည်။ သို့သော်သင်သည်အတုငါးမျှားပါက Texas Texas rig နှင့်ပလတ်စတစ်ပိုးကောင်များအသုံးပြုရန်အကြံပေးလိမ့်မည်။. ဒီဟာကကျွန်တော့်အတွက်ကောင်းကောင်းအလုပ်ဖြစ်တာတွေ့ပြီ. အခုဘာအမျိုးအစားအတွက်သင်ငါးဖမ်းနေသလဲ၊ ဘယ်လိုငါးစာအမျိုးအစားကိုသင်အသုံးပြုချင်သလဲဆိုတာသိပြီ. လာမယ့်ဘေ့ငါးဖမ်းလျှို့ဝှက်ချက်ပါလိမ့်မယ်: ဘယ်မှာဖမ်းရန်သွားရကြ၏?. ပါးစပ်ကြီးကိုဖမ်းရန်ဘယ်နေရာကိုမဆိုသွားနိုင်သည်. သငျသညျစီးသွားနိုင်ပါတယ်, ကန်, မြစ်သို့မဟုတ်ရေကန်. သငျသညျအစဉျအမွဲသငျသညျကြီးမားသောပါးစပ်ဘေ့စများသောအားဖြင့်ဖြီးအောက်မှာကမ်းအနီးတွင်တွေ့ကြသည်, လဲကျသစ်ပင်များနှင့် / သို့မဟုတ်ခြေလက်အင်္ဂါ, သို့မဟုတ်ကျောက်ဆောင်အနီး. ရေကန်အလယ်တွင်တွေ့ရခဲသည်. နောက်ထပ်သိသောအခြားဘေ့စ်ငါးဖမ်းခြင်းလျှို့ဝှက်ချက်မှာဘေ့စ်ကိုဖမ်းရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်. သင်သည်မည်သည့်နှစ်တွင်မဆိုကြီးမားသောပါးစပ်ကိုဖမ်းနိုင်သည်, နွေ ဦး, နွေရာသီ, ဆောင်းရာသီ, ပြိုလဲတကယ်အရေးမပါဘူး; ကအားလုံးကို angler ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာကိုပေါ်တွင်မူတည်သည်. ဆောင်းရာသီအတွက်ရေဓာတ်ပြည့်ဝစေရန်ဘေ့သည်တတ်နိုင်သမျှကိုစားနေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျဆုံးခြင်းကိုနှစ်သက်သည်. သင်ရေကန်များအေးခဲနေသောပြည်နယ်တစ်ခုတွင်မနေပါက၎င်းသည်အပင်ပေါက်ပြီးနောက်ငါးမျှားရန်အကောင်းဆုံးအချိန်သည်နွေရာသီနှောင်းပိုင်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။. ဒါကအကြောင်းပါ. အခုဘေ့ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းလျှို့ဝှက်ချက်ဆိုတာမင်းသိပြီ, ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးဘေ့ငါးဖမ်းလျှို့ဝှက်ချက်ဟာသင်လျှို့ဝှက်ထားတာဖြစ်တယ်၊… PSSST…. အဘယ်အရာနှင့်အဘယ်မှာရှိတစ် ဦး ဘေ့ငါးဖမ်းလျှို့ဝှက်ချက်?
The two factors which you have to take in to account for the collection of sports memorabilia is space and money. You may like to collect any of the sports memorabilia like NASCAR memorabilia, Golf Memorabilia, Football Memorabilia, Basketball Memorabilia or Baseball Collectible Memorabilia. Regardless of the sports that you like, you will always want to buyanew item from your favorite player as it will be an opportunity which you will not want to miss. The kind of sports memorabilia you buy will depend on your personal preference and it can be of any kind of sports or games. There are quiteafew people who prefer to stick toacertain subject matter which they are interested in such as anything Tiger Woods, Football Collectible memorabilia of the 49ers or Baseball memorabilia of the Boston Red Sox. There are also certain collectors who collect more wide-ranging items like NBA Basketball memorabilia, NASCAR collectibles, Golf memorabilia, Football memorabilia, any or all Baseball collectibles. The collectibles may be in the form of one thing likeasigned baseball or football such as this, http://www.sports-collectibles-store.com/NFL_Footballs-p-1-c-9.html. It can also includeanumber of things like the autograph of each and every member ofafootball, basketball or baseball team or group. The price of the sports memorabilia is directly proportional to the fame and status of the sports person as well as how rare that item is in the market. If the item you want is rare then its cost will be high. ဥပမာအားဖြင့်, ifaplayer only givesalimited number of autographs then the cost of the items will obviously be more. Having the hobby to collect Autographed Sports Memorabilia is wonderful past time for the youngsters as well as the elderly people. This hobby is not restricted to any persons and the business has increased tremendously over time. Autographed Sports Memorabilia And Collecting Them
The National Golf Coaches Association (NGCA) will induct John Crooks, Women’s golf coach at Campbell University and Leta Lindley and Michele Redman into the NGCA Hall of Fame at their upcoming Hall of Fame Induction Banquet to be held Tuesday, January 10, 2006, in Lake Tahoe, Nevada. Crooks becomes the 39th member of the Coaches Hall of Fame and Lindley and Redman become the 47th and 48th members of the Players Hall of Fame. The induction ceremony, with master of ceremonies Kay Cockerill of The Golf Channel, will take place during the 2006 NGCA Member Convention at the Caesar’s Tahoe Hotel. Now in his 15th year in charge of the women’s program at Campbell University, Crooks is one of the top collegiate golf coaches in the country. During his tenure, Crooks has led the women’s team to eight conference titles and 11 NCAA Regional appearances. He guided the Lady Camels to three-consecutive Atlantic Sun Conference championships from 1996-98 and again in 2001, ’02 နှင့် ’04. Crooks has been named conference coach of the year 12 times for either the men’s or women’s program in the last 15 နှစ်ပေါင်း. He was named Atlantic Sun Women’s Golf Coach of the Year for the second-straight season in 2002 and again in ’04. His women’s teams have won 49 ပြိုင်ပွဲ. Entering the 2005-06 season Crooks ranks second among all active Division I women’s coaches in tournament victories with 49, trailing only Dan Brooks of Duke (89). His women have wonatournament in all 14 years in which he has served as head coach. Coach Crooks has directed 98 golfers to all-conference honors during his tenure and 100 individuals to all-academic honors. In 2004-05, Crooks’ women earned an at-large berth to the NCAA East Regional and finished 11th, its best showing since 1997. The team won four tournaments, the program’s most in five years. A native of Winston-Salem, N.C., andaBuies Creek resident Crooks played at the University of Houston under legendary coach Dave Williams. He isaformer USGA Junior Amateur Champion who competes regularly in major state and national amateur championships. He won the 2001 North and South Senior Amateur Championship by five strokes after cardinga73-72-71’216 at Pinehurst Nos. 8,5နှင့် 2. John Crooks and Michele Redman are going into the NGCA Hall of Fame
Playing mini golf is not just for children. It isagame that can also be played by grownups which may be smaller than the ones in the real course. All the person needs to play isagolf club andaball. People who have never played the real game will easily get the hang of it by just watching how others swing and putt the ball into the hole. Here are some tips when playing: 1. One should read the rules and regulations posted outside before playing the game. There are certain rules there, which are being implemented for the safety of the players and other people who frequent that place. 2. There isacertain dress code when playing this game. It is advisable to wear some lose clothing which will make that person feel relaxed andacap if the weather is hot. 3. Whenever someone is takingashot, one should not create any sounds or disrupt the player asasign of courtesy to that person. 4. Just like in real golf, people take turns when playing in one hole. Should that person do well inacertain hole, that person has the right to tee off again in the next hole. 5. After one has putted, it is best to retrieve the ball away from where the person will putt since this is considered as impolite to the other player. 6. နောက်ဆုံး, play the game honestly. Playing miniature golf with friends or family is just one of the many forms of relaxation people can do these days. It isatime for bonding andagreat escape from the pressures of the city. If that person wants to get serious in this game, one can practice more often and join some miniature golf competitions and even winaprize. Such facilities can be found on the web or by checking the local directory. Miniature golf facilities are not just for people who are normal but are also for people with disabilities. The law requires such places to make at least half the number of holes accessible to these individuals. Failure to do so will require the owners of the establishment to redesign the layout in compliance with the requirements of such recreational facilities. This activity is very affordable and it doesn’t really matter if one wins or loses. It is all about having fun which everyone can enjoy even if one is young or old and able or disabled. Winning At Miniature Golf
Derbyshire ရှိ Treasure Hunt ‘ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တည်ဆောက်ခြင်း
ဒါဘီ, လှပသောအလှအပနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအတွက်ကောင်းမွန်သောနောက်ခံသည်သင်၏ကော်ပိုရေးရှင်းအစီအစဉ်များကိုစီစဉ်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာနှင့်တူသည်. အလုပ်ခွင်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အပန်းဖြေမှုနှင့်အသင်းအဖွဲ့စိတ်ဓာတ်တို့ကိုပိုမိုအလေးထားသည်, Chillisauce သည် Derbyshire အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်တစ်လျှောက်တွင်ပြင်ပကော်ပိုရေးရှင်းအသင်းအဖွဲ့တည်ဆောက်ခြင်းလှုပ်ရှားမှုများမှတစ်ဆင့်အသင်းအဖွဲ့၏အရေးပါမှုကိုပြန်လည်ရှာဖွေရန်အကောင်းဆုံးနေရာသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။. Derbyshire ရှိ GSP Treasure Hunt လေ့လာရေးခရီး ရာသီ၏အမဲလိုက်ခြင်းအဘို့အဆင်သင့်ပါ. သင့်တွင်စွမ်းအင်ပြည့်ဝ။ စွန့်စားနိုင်သောစွန့်စားရသည့်အသင်းအဖွဲ့ရှိလျှင်၊, ထို့နောက် Derbyshire ရှိ GSP ရတနာသည်သင်အတွက်မှန်ကန်သောအရာဖြစ်သည်. ကော်ပိုရိတ်အဖွဲ့များကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပေးပြီးညွှန်ကြားချက်များကို၎င်းတို့ထံလွှဲပြောင်းပေးသည်. ဂိမ်းတစ်ခုလုံးသည်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအလှည့်အပြောင်းများနှင့်ပြည့်နေလျှင်. ကော်ပိုရေးရှင်းအဖွဲ့များသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတည်နေရာပြစနစ်များကို အသုံးပြု၍ မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဘဏ္ownာရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ရမည်. ကော်ပိုရေးရှင်းအဖွဲ့ ၀ င်များအားလုံးသည်ရတနာရှာရန်နေရာအမျိုးမျိုးမှသဲလွန်စများကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတို့တွင် ဦး နှောက်များကိုအတူတကွထားကြသည်. သူတို့သဲလွန်စများများသဲလွန်စ, သူတို့ဂိုးသွင်းပိုမှတ်. စိတ်မပူပါနဲ့, သင်ရှုံးနိမ့်မည်မဟုတ်. မိမိကိုယ်ကိုမပြဘဲကော်ပိုရေးရှင်းအဖွဲ့များကိုလုံခြုံရေးအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်လိုက်နာသောနည်းပြတစ် ဦး ရှိပါသည်. ထို့အပြင်, ကော်ပိုရေးရှင်းအဖွဲ့များသည်အဖွဲ့ ၀ င်များအကြားသတင်းအချက်အလက်ပေးပို့ရန်ရေဒီယိုတစ်လုံးကိုသူတို့နှင့်အတူသယ်ဆောင်သည်. စိတ်လှုပ်ရှားစရာပါ, ပျော်စရာကောင်းပြီးသင်ပြုလုပ်သည့်အလှည့်တိုင်း၌အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောသက်သေသာဓကများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်. အဖွဲ့အဆောက်အအုံအပေါ်ဘဏ္Hာကို Hunt ၏လွှမ်းမိုးမှု ကော်ပိုရေးရှင်းအသင်း၏ ဦး နှောက်အားလုံးအတူတကွအလုပ်လုပ်မှသာသင်ဘဏ္theာကိုရှာပါ. Derbyshire ရှိရတနာရှာဖွေခြင်း, အရာအမဲလိုက်ခြင်း၏သဘောသဘာဝအရသိရသည်တစ်ဝက်တစ်ရက်သို့မဟုတ်တ ဦး တည်းအပြည့်အဝကြာရှည်နိုင်ပါတယ်, စိတ်ရှည်ဖို့သင်ပေးတယ်, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အရေးအကြီးဆုံးမှာအသင်းစိတ်ဓာတ်၏တန်ဖိုးများကိုဖော်ပြသည်. ၎င်းသည်တစ် ဦး တည်းလုပ်ဆောင်။ မရနိုင်သောထိုကော်ပိုရိတ်လှုပ်ရှားမှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. ကော်ပိုရေးရှင်းအဖွဲ့ ၀ င်အားလုံးတန်းတူညီမျှမှုရှိသည့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အနေဖြင့်သင်အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်. Chillisauce မှစီစဉ်သောကော်ပိုရိတ်လှုပ်ရှားမှုများသည်သင်ရှာဖွေနေသည့်ဘဏ္theာကိုသာမကသင့်ကိုအနိုင်ရရှိသည်, ဒါပေမယ့်လည်းအားလုံး၏အကြီးမားဆုံးဘဏ္treာကို ‘ ကော်ပိုရေးရှင်းအဖွဲ့ ၀ င်များအကြားအလုပ်တွင်စုံလင်သောနားလည်မှုနှင့်စည်းလုံးမှုရှိခြင်း. Derbyshire ရှိ Treasure Hunt ‘ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တည်ဆောက်ခြင်း
Shaun အလက်ဇန်းဒါး : 2000 နေ့ပုံမူကြမ်း
Shaun Alexander ကိုသြဂုတ်လတွင်မွေးဖွားခဲ့သည် 30, 1977 Florence မှာ, ကင်တပ်ကီ. သူသည်ဘောလုံးပွဲကိုစတင်ကစားစဉ်ကတည်းကသူသည်ကစားသမားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်မည်မှာထင်ရှားသည်. အလက်ဇန်းဒါးသည် NFL ၌ကောင်းမွန်သောအပြေးတစ်ခုဖြစ်ရန်လိုအပ်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုအားလုံးရှိသည်မဟုတ်ပါ, ဒါပေမယ့်အနိုင်ရရန်သူ၏အလိုတော်အများအပြားကလိုက်ဖက်မဟုတ်ပါဘူး. ဤအရာနှစ်ခုလုံးပေါင်းစပ်ပြီးအလက်ဇန္ဒားသည်မိမိကိုယ်ကိုအချိန်ကာလ၏အကြီးမားဆုံးပြေးကျောရိုးတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုအဘယ်ကြောင့်သိမြင်ရလွယ်ကူသည်. အထက်တန်းကျောင်းတွင်သူ၏အကြီးတန်းနှစ်တာကာလအတွင်းအလက်ဇန်းဒါးကို Mr ဟုအမည်တွင်ခဲ့သည်. ဘောလုံး’ ကီပြည်နယ်အတွက်. နှစ်စဉ်ဒီဆုပြည်နယ်အတွင်းရှိအကောင်းဆုံးကစားသမားမှတတ်၏, နှင့်အလက်ဇန်းဒါးကျိန်းသေဒီထိုက်. အထက်တန်းကျောင်းတစ်ခုအပြီးတွင်အလက်ဇန်းဒါးသည် Alabama တက္ကသိုလ်၌ဘောလုံးကစားရန်ပညာသင်ဆုကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံခဲ့သည်. သူဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုပြဖို့အချိန်မဖြုန်းတီးခဲ့ဘူး. တစ် ဦး freshman အဖြစ်သူသည်များစွာသောနံပါတ်တက်ထား၏, သူအဘို့အပွေးရှိရာတ ဦး တည်းဂိမ်းအပါအဝငျ 291 ကိုက်. အလက်ဇန်းဒါးသည်သူ၏ဒုတိယနှစ်နှင့်အငယ်တန်းရာသီများတွင်ထပ်တူပြုခဲ့သည်, အရာအလှည့်အတွက်မိမိအဘို့အရည်အချင်းပြည့်မီကြေညာသူ့ကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည် 2000 NFL မူကြမ်း. Seattle Seahawks သည် Alexander ကို ၁၉ ကြိမ်မြောက်ရွေးခြယ်မှုဖြင့်ရွေးချယ်သည် 2000 NFL မူကြမ်း. အခြားအသင်းများသည်သူ၏န်ဆောင်မှုအပေါ်အားဖြင့်လွန်ပေမယ့်, အလက်ဇန်းဒါးသည်သူတို့လွဲချော်နေသောအရာများကိုပြသရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့သည်. သူကအားလုံးအတွက်ကစားပေမယ့် 16 တစ်လူသစ်အဖြစ်ဂိမ်းများကို, အဲဒါမရောက်သေးဘူး 2001 သူတကယ်မုန်တိုင်းအားဖြင့်လိဂ်ယူလာသောအခါ. အလက်ဇန္ဒားကို NFL Pro Bowl Team တွင်သုံးကြိမ်တိုင်အမည်ပေးခဲ့သည်, နှင့်လိဂ်ဝင်ရောက်ကတည်းကများစွာသောအခြားဆုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်. ဤမျှလောက်များစွာသောကောင်းသောနှစ်ပေါင်းသည်သူ၏ခါးပတ်အောက်မှာ, Shaun Alexander ကဒီအရှိန်အဟုန်ကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင်သူဟာသမိုင်းမှာသမိုင်းဝင်သွားမှာပါ။ ကွင်းပြင်မှာထိတွေ့မှုတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးပြေးကျောထောက်နောက်ခံတစ်ခုအနေနဲ့ပါလိမ့်မယ်! Shaun အလက်ဇန်းဒါး : 2000 နေ့ပုံမူကြမ်း
NFL ဘောလုံးပွဲကိုတက်ရောက်ခြင်းနှင့်ဤအားကစားဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သတ်၍ စိတ်လှုပ်ရှားမှုများအားလုံးကိုတွေ့ကြုံခြင်းထက်ပိုကောင်းသောအရာမရှိပါ။. ဂိမ်းမှဘာယူဆောင်လာရန်မသေချာသောသူတို့အဘို့, ပရိသတ်များနှင့်ပရိသတ်အားလုံးမပါဘဲမဖြစ်သင့်သောလိုအပ်သောပစ္စည်းအနည်းငယ်ရှိပါသည်. သင့်လျော်သောဝတ်စားဆင်ယင်မှုပထမနှင့်အဓိက, NFL ဘောလုံးပွဲသို့တက်ရောက်သူသည်သူတို့၏အတွေ့အကြုံကိုပျော်စရာကောင်းအောင်သေချာစေရန်သင့်လျော်သောအဝတ်အစားကိုဝတ်ဆင်သင့်သည်. ပရိသတ်များသည်ရာသီဥတုနှင့်ရာသီဥတုနှင့်အညီသက်သောင့်သက်သာရှိသောအဝတ်အစားများဝတ်ဆင်သင့်သည်. ဥပမာ, တ ဦး တည်းမြောက်ပိုင်းတစ် NFL ဘောလုံးဂိမ်းသွားလျှင်, သူတို့ကနွေးထွေးတဲ့အဝတ်အစားတွေဝတ်သင့်တယ်၊ အကယ်၍ ဆီးနှင်းသို့မဟုတ်မိုးသည်အချက်အချာဖြစ်ပြီးအားကစားကွင်းသည်အိမ်ပြင်တွင်ဖြစ်ပါကရေစိုခံအောင်ပြုလုပ်သင့်သည်. သို့သော်ငြားလည်း, မိုင်ယာမီလင်းပိုင်ဂိမ်းသို့သွားသောသူသည်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောအ ၀ တ်အစားကို ၀ တ်ဆင်သင့်သည်. Tailgating ပစ္စည်းများ Tailgating သည် NFL ဂိမ်းကစားသည့်အခါအားသာချက်ယူရန်အလွန်ကောင်းသောအချိန်ဖြစ်သည်. ဤသည်အားကစားကွင်းရပ်နားအများကြီးမှာစုဆောင်းပါဝငျသညျ, အခြားပရိတ်သတ်များနှင့်စကားပြောခြင်းနှင့်အကြီးအချုပ်ချုပ်ထားသောအစားအစာများကိုစားခြင်း. ဂိမ်းမတိုင်မီ tailgate သွားမယ့်သူတစ် ဦး အေးဆောင်ခဲ့ရမည်, အစားအစာ, အဖျော်ယမကာနှင့်၎င်းတို့၏အစားအစာချက်ပြုတ်ရန်လိုအပ်သောမည်သည့်ပစ္စည်းများ. အများအားဖြင့်အားကစားရုံများစွာသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီကိုကားရပ်နားရာနေရာများတွင်သယ်ဆောင်နိုင်သောအသားကင်များကိုသုံးခွင့်ပြုသည်. နောက်ဆုံးအားကစားကွင်းအတွင်းရှိအမှတ်တရပစ္စည်းများနှင့်အစားအစာအတွက်ငွေ, NFL ဂိမ်းသွားသူတစ် ဦး သည်ဂိမ်းအတွင်းပစ္စည်းအချို့ ၀ ယ်ရန်ငွေအလုံအလောက်ရှိကြောင်းသေချာစေသင့်သည်. ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာအဖြစ်ပစ္စည်းများ, အချိုရည်နှင့်အမှတ်တရပစ္စည်းများကိုဘောလုံးကွင်းများအတွင်းဝယ်ယူနိုင်ပြီးပရိသတ်များအနေဖြင့်အကြွေးဝယ်ကဒ်များမယူသောကြောင့်ဤပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ယူရန်ငွေအလုံအလောက်ရှိသင့်သည်။. ဘောလုံးပွဲတစ်ခုယူလာရန်ပစ္စည်းများ
သင်၏နောက်ငါးဖမ်းခရီးကိုသွားရန် nightcrawlers ကိုအဆင်သင့်ပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်. ရှေးအကျဆုံးနှင့်အများဆုံးအသုံးပြုသောနည်းလမ်းများအနက်မှတစ်ခုမှာသင့်အိမ်၌ crawler bin တစ်ခုဖြစ်သည်. ၎င်းသည် 3x3x3 planter box ကဲ့သို့ရိုးရှင်းနိုင်သည် ‘ ကောင်းသောမြေနှင့်ပြည့်စုံသောစပျစ်ရည်ကိုစည်. သတ္တုသို့မဟုတ်ပလတ်စတစ်ကဲ့သို့သောသဘာဝပစ္စည်းများမှဝေးဝေးနေရန်ကြိုးစားပါ, သူတို့သည်သဘာဝပစ္စည်းများမှပြုလုပ်ထားသောကွန်တိန်နာများထက်ပိုမိုလျှင်မြန်စွာအပူပေးနိုင်သည်. သင်သည်သင်၏မြေပြင်ပေါ်တွင်သင်၏ box ကိုရှိခြင်းအပေါ်စီစဉ်ထားလျှင်, crawlers မှောင်မိုက်ကြိုက်တတ်တဲ့သတိရပါ. ဒါကြောင့်ပွင့်လင်းပစ္စည်းများမသုံးကြဘူး. ကျွန်တော့်အဖိုးကသူ့အိမ်နောက်ဘက်မြေ၌မြှုပ်ထားသောသေတ္တာတစ်လုံးရှိသည်. သူမဟာနည်းဗျူဟာကိုအိမ်အနီးအနားမှာထားခဲ့တယ်, တစ် ဦး shadier flowerbed ၌တည်၏. ဤနည်းလမ်းသည်အချက်နှစ်ချက်ကိုပြီးမြောက်စေသည်. ပထမ, ၎င်းသည်ပိုးကောင်များကိုအလယ်ဗဟိုတွင်ထားရှိပြီးသူ၏နောက်ငါးဖမ်းခရီးစဉ်ကိုအလျင်အမြန်တူးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်. ဒုတိယ, နွေရာသီများအတွင်းပိုးကောင်များသည်ပူလွန်းခြင်းမရှိကြောင်းအာမခံထားသည်. တတိယ, လမ်း၏အပြင်ဘက်မှမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှထိုလမ်းသို့မကျရောက်နိုင်ပါဟုဆိုလိုသည်. သင်သည်သင်၏ box ကိုမြေပြင်၌ထားရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်, ထိပ်သို့သွားသောလမ်းများသို့သွားရန်မလိုပါ။ သိုမဟုတ်သင်၏တီကောင်များက Houdini ဆွဲ။ လွတ်မြောက်လိမ့်မည်. တစ်ခုချင်းစီကိုငါးဖမ်းခရီးစဉ်ပြီးနောက်, အဘိုးကအသုံးမပြုတဲ့ nightcrawlers ကိုသေတ္တာထဲထည့်လိုက်သည်. ဤနည်းအားဖြင့်သူသည်နောက်ငါးဖမ်းခရီးအတွက်ငါးဖမ်းသူများအမြဲတမ်းရှိနေသည်. ဒါကသင့်ရဲ့ worm box ကိုသိုလှောင်ဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်. နောက်တစ်ခုကတော့ worm farm တစ်ခုကနေတစ်ဆင့် worms တွေကိုအမိန့်ပေးဖို့ပါ. သင့်ရဲ့ worm box ကိုစတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ပုံမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ, အသုံးမပြုတဲ့ပိုးကောင်များကိုသင်၏ခရီးစဉ်များထဲသို့ထည့်ခြင်းသည်သွားများကိုအဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်ကူညီလိမ့်မည်. ပျော်ရွှင်ဖွယ်တီကောင်ဘင်ကိုလက်ခံနိုင်သည့်အချိုးအစားသည်ကြားဖူးသည် 1 ရန် 4. ဒါဆိုပါစို့ 1/2 တစ်ပေါင်ပိုးမွှားတွေအကြောင်းသော box ထဲမှာပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မယ်2ကုဗပေ. အောက်ပါတို့သည်၎င်းတို့ထံသို့ရောက်နိုင်ရန်အတွက်ပိုးကောင်များသည်အရွယ်အစားကောင်းသောမျက်နှာပြင်needရိယာလိုအပ်ကြောင်းသတိရပါ. ဒါ့အပြင်, ကောင်းမြတ်ခြင်းအဘို့အ, အောက်ခြေရှိအပေါက်များနှင့်ရေနုတ်မြောင်းများအတွက်နှစ်ဖက်တူးရန်မမေ့ပါနှင့်. ဒီဟာကလေထုအတွက်လည်းကောင်းတယ်, သင့်ရဲ့ box ကိုမြေပြင်အထက်လျှင်. စာရွက်များမှုတ်ထုတ်ထားသောသတင်းစာသည်ပိုးကောင်များကိုကာကွယ်ရန်နှင့်မြေ၌အစိုဓာတ်ထိန်းထားရန်ကူညီသည်. တီကောင်အိပ်ယာနှင့်အစားအစာဖြည့်စွက်မှုများကိုပင်ရောင်းသောကုမ္ပဏီအမြောက်အများရှိသည်. သငျသညျဂရုစိုက်မဆိုသက်ရှိအရာကဲ့သို့, ၎င်းကိုဖတ်ရန်အချိန်အနည်းငယ်ယူခြင်းသည်အောင်မြင်သောအခြေအနေကိုအာမခံလိမ့်မည်. ၎င်းသည်ပိုးကောင်များနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်. Remember'fish သည်အသေကောင်များကိုမကြိုက်ပါ. သူတို့ကို ‘box တစ်ခုပေးပါ’ နေ့လည်စာစားပါ! နေအိမ် - ထုတ်လုပ် Nightcrawlers
ပိုက်ကွန်ပေါ်ရှိအွန်လိုင်းဂေါက်သီးသင်ကြားမှုအစီအစဉ်များသည်မကြာသေးမီအချိန်များအတွင်းအလွန်များပြားလာသည်. ထိုအသေးသူတို့ခုန်နှင့်ကန့်သတ်အတွက်ကြီးထွားဖို့ဆက်လက်. ဤထူးခြားသောကြီးထွားမှုအတွက်အကြောင်းပြချက်များထဲမှတစ်ခုမှာဤအွန်လိုင်းဂေါက်သီးညွှန်ကြားချက်များစွာသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိပြီးဂေါက်သီးသမားများစွာအားသူတို့၏မသန်စွမ်းမှုကိုတိုးတက်စေခြင်းဖြစ်သည်။. World Wide Web ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အံ့သြဖွယ်ရာများအနက်တစ်ခုမှာများစွာသောသူများအတွက်အကြံပေးခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခြင်းအစီအစဉ်များကျယ်ပြန့်စွာပြုလုပ်ခြင်းသည်သင်နားလည်ရပေမည်။. ဂေါက်သီးသည်ခြွင်းချက်မရှိပါ။ အွန်လိုင်းဂေါက်ကွင်းလမ်းညွှန်အစီအစဉ်များသည်အော့ဖ်လိုင်းညီမျှခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်စျေးသက်သက်သာသာရှိသည်. ဥပမာအားဖြင့်သင်တန်း၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးညွှန်ကြားချက်များကုန်ကျစရိတ်သည်များစွာသောလူတို့၏နည်းလမ်းထက်သာလွန်သည်. တူညီတဲ့ညွှန်ကြားချက်အွန်လိုင်းဂေါက်သီးညွှန်ကြားချက်မှတဆင့်ကယ်နှုတ်သောအခါ, ကုန်ကျစရိတ်သိသိသာသာလျှော့ချဖြစ်ပါတယ်. အချို့ကိစ္စများတွင်ဤအဖိုးတန်သောအွန်လိုင်းဂေါက်သီးညွှန်ကြားချက်များကိုအခမဲ့ပင်ပေးသည်. တကယ်တော့အခမဲ့အွန်လိုင်းဂေါက်သီးလမ်းညွှန်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေအများကြီးရှိတယ်. လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာ၎င်းတို့တွင်ပါ ၀ င်သောဂေါက်သီးသင်ကြားမှုအရည်အသွေးကိုဂရုစိုက်ရန်ဖြစ်သည်. ဤသည်အွန်လိုင်းဂေါက်သီးညွှန်ကြားချက်များစွာကိုပိုပြီးဂေါက်သီးမှသုံးစွဲနိုင်စေတော်မူပြီ. အံ့သြစရာမဟုတ်ပါစံချိန်စံညွှန်းများအားလုံးပတ်ပတ်လည်ကိုအလွန်တိုးတက်ပါပြီ. ၎င်းသည်အွန်လိုင်းဂေါက်သီးညွှန်ကြားချက်ရင်းမြစ်များကိုအသုံးချရန်နှောင့်နှေးမနေသောဂေါက်သီးသမားများအတွက်အလွန်ခက်ခဲစေသည်။. ဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းအားဖြင့်အွန်လိုင်းဂေါက်ရိုက်ခြင်းအားဖြင့်နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုရှိသေးသည်. ထိုသူတို့ကများသောအားဖြင့်အများကြီးဂေါက်သီးအားလာအောင်နှိုးဆွသောအချက်ဖြစ်ပါသည်. လှုံ့ဆော်မှုသည်အရေးကြီးသည်, အထူးသဖြင့်သူတို့၏ဂိမ်းကိုတိုးတက်အောင်ကြိုးစားနေသူနှင့်သင်တန်းကိုမကြာသေးမီကအရှက်ရခဲ့သောဂေါက်သီးသမားတစ် ဦး ဖြစ်သည်. တချို့ကတောင်မှအားကစားကိုလုံးဝစွန့်လွှတ်တော့မည်. ဤသည်လှုံ့ဆော်မှုအလွန်အရေးကြီးသောသည်အရာဖြစ်ပြီးအွန်လိုင်းဂေါက်သီးညွှန်ကြားချက်များကများသောအားဖြင့်၎င်းကိုထောက်ပံ့ပေးသည်. အွန်လိုင်းဂေါက်လမ်းညွှန်များသည်စျေးပေါသော်လည်းထိရောက်မှုရှိသည်
Right Running Shoe ကိုရွေးချယ်ခြင်း
အသစ်သောအရာအားလုံးကို ၀ ယ်ခြင်းသည်ပျော်စရာများစွာဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်လည်းအလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်. Running ဖိနပ်တစ်ထည်ကို ၀ ယ်ယူခြင်းသည်ခြားနားသည်, ငါတို့ကိုယ်ခန္ဓာ၏သဘောသဘာဝကိုငါသူတို့စျေးပေါသို့မဟုတ်အဆင်ပြေသောကြောင့်သာဖိနပ်တရံသို့အပြေးအလွှားအကြံပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ. အဘယ်သူမျှလူနှစ် ဦး ကိုအတိအကျတူညီတဲ့ခြေရှိသည်; သို့သော်ထုတ်လုပ်သည်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားသုံးခုသို့ဖိနပ်ကိုခွဲခြားပါပြီ: ကူရှင်, တည်ငြိမ်မှု, နှင့် Motion Control. ဤအမျိုးအစားသုံးမျိုးအတွင်း၎င်းတို့သည်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ဒါနဲ့အတူစတင်ရန်ကောင်းတစ် ဦး အခြေခံလမ်းညွှန်ဖြစ်ပါတယ်. ကူရှင် – ကတ္တရာဖိနပ်ဆိုသည်မှာဖိနပ်မပါသောဖိနပ်များဖြစ်သည်. ဒီဖိနပ်ကဒီထောက်ခံမှုကိုမလိုအပ်တဲ့အပြေးသမားတွေအတွက်ကောင်းတယ်, နှင့်ကြားနေခြေရှိသည်. ယေဘုယျအားဖြင့်ဤဖိနပ်အမျိုးအစားသည်မြင့်မားသောအာကာသရှိသောအပြေးသမားအတွက်ဖြစ်သည်. ဤဖိနပ်အမျိုးအစားသည်မမှန်ကန်သောဖြစ်ရပ်များသည်သင်အသံထွက်သူသို့မဟုတ် overpronator များဖြစ်သည့်ကိစ္စတွင်ဖြစ်သည်. တည်ငြိမ်မှု – တည်ငြိမ်မှုရှိသောဖိနပ်များသည်အလယ်အလတ်တန်းစားဖိနပ်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးကူရှင်နှင့်လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်မှုကြားမျှတမှုကိုပေးသည်. ဒီဖိနပ်ဟာပုံမှန်အားဖြင့်သာမန်ခုံတန်းရှည်ရှိတဲ့အပြေးသမားတစ် ဦး အတွက်ပါ, ခြေ၏ပြင်ပမှာဆင်းသက်နှင့်ရှေ့ဆက်မိတ်ဆက်. အကယ်၍ သင်ဤအမျိုးအစားသည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိမည်ကိုမသေချာလျှင်စတင်ရန်နေရာကောင်းဖြစ်သည်. Motion Control – Motion control အမျိုးအစားသည်အပြေးဖိနပ်တွင်အမှန်တကယ်လိုအပ်သည့်အပြေးသမားများအတွက်ဖြစ်သည်. Extreme အသံထွက်များနှင့် overpronators များသည် Motion control ဖိနပ်၏အားသာချက်ကိုရယူနိုင်သည်, ခြေဖ ၀ ါးနှင့်အားနည်းသောဖိနပ်ပါသောဖိနပ်တစ်ရံမှတည်ငြိမ်မှုများစွာရှိသောဖိနပ်မှအကျိုးခံစားရမည်. ဟုတ်ပါတယ်ငါအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့တူသောသာသုံးအမျိုးအစားနှင့်အတူ, အပြောင်းအလဲအတွက်အခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်. ၎င်းကိုဖိနပ်အပြေးများတွင်ရှာဖွေရန်အရာများကိုအမြန်လမ်းညွှန်အဖြစ်အသုံးပြုရန်သာရည်ရွယ်သည်. ပြေးနေတဲ့စတိုးဆိုင်ကိုသွားလည်ပတ်ပြီး ၀ န်ထမ်းတစ်ယောက်ကမင်းရဲ့ခြေထောက်ကိုဘယ်လိုအမျိုးအစားနဲ့ကိုက်ညီတယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိစေဖို့သင့်ခြေထောက်ကိုကြည့်ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်. အကယ်၍ သင့်တွင်ပြင်းထန်သောအသံထွက်ကဲ့သို့သောပြင်းထန်သောခြေထောက်ပြcomplနာများရှိပါက, ပြိုလဲမုတ်, စသည်တို့ငါခြေလျင်ဆရာဝန်သွားရောက်လည်ပတ်အကြံပြုလိမ့်မယ်, သူတို့ကိုယ်သူတို့အားဖြင့်ဖိနပ်အပြေးမလုံလောကျပါလိမ့်မယ်အဖြစ်. သငျသညျ orthotics လိုအပ်နိုင်ပါတယ်, သို့မဟုတ်သင့်ခြေထောက်ပေါ်ရောက်အောင်စောင့်ရှောက်ရန်ရိုးရှင်းသည့်အားဖြည့်လေ့ကျင့်ခန်းများပင်. ဤဆောင်းပါးကိုအောက်ပါစာတန်းနှင့်စာရေးသူ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိများကို hyperlink များနှင့်လိမ္မာပါးနပ်စွာထားရှိလျှင်ပြန်လည်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပါ. Right Running Shoe ကိုရွေးချယ်ခြင်း
လေ့ကျင့်ခန်းစက်ဘီးအမျိုးမျိုးကိုမော်ဒယ်အမျိုးမျိုးနှင့်လူများ၏ဘတ်ဂျက်နှင့်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီကုန်ကျနိုင်သည်. လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်စက်ဘီးအမျိုးအစားသုံးမျိုးရှိသည်, Semi-recumbent လေ့ကျင့်ခန်းဆိုင်ကယ်နှင့် recumbent လေ့ကျင့်ခန်းဆိုင်ကယ်. သင်၏လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ သင်ဝယ်ယူနိုင်သည်, သောသင်တို့၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီ. ၎င်းသည်နှလုံးနှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကယ်လိုရီကိုအလွယ်တကူပျောက်ကွယ်စေနိုင်ပြီးကိန်းဂဏန်းကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်. လက်ရှိတည်ရှိနေသောစာရေးကိရိယာသံသရာသည်ကယ်လိုရီများကိုလောင်ကျွမ်းစေပြီးကောင်းမွန်သောကိုယ်ထည်ကိုရရှိရန်အတွက်စက်ဘီးစီးသကဲ့သို့လူကြိုက်များသည်. လက်ရှိလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ထားသောစက်ဘီးသည်လူတစ်ယောက်၏သွေးပေါင်ချိန်ကိုလျှော့ချရန်ကူညီသည်. ထိုသူသည်ကြမ်းပြင်နားမှာထိုင်နေသည်. လူတစ်ယောက်ရဲ့ခြေထောက်ကရင်ဘတ်အမြင့်နားမှာရှိတယ်. Control panels များသည်အမျိုးမျိုးသောဖတ်ခြင်းများကိုပြသပြီး၎င်းသည်လက်ရှိစက်ဘီးစီးသူတစ် ဦး အား၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ထားသောပစ်မှတ်သို့ရောက်ရှိနေခြင်းရှိမရှိသိရန်ကူညီပေးသည်။. ထိန်းချုပ်မှု panel ကသွေးခုန်နှုန်းမှုနှုန်းများအတွက်ဖတ်ပေးသည်, နှလုံးခုန်နှုန်း, မီးရှို့ရာကယ်လိုရီအရေအတွက်, အကွာအဝေးခရီးသွားစသည်တို့. အကြီးမားဆုံးအားသာချက်မှာလက်ရှိလေ့ကျင့်ခန်းစက်ဘီးပေါ်တွင်အချိန်မရွေးလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်. အဆိုပါစက်ဘီးအမြင့်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်. ထိုင်ခုံ၏အမြင့်အပြင်ခံနိုင်ရည်အဆင့်ကိုချိန်ညှိရန်လွယ်ကူသည်. ပိုမိုအစွမ်းထက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုအတွက်သာမကဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့ပရိုဂရမ်အမျိုးမျိုးလည်းရှိပါတယ်. ၎င်းသည်လေ့ကျင့်ခန်းဆိုင်ကယ်တစ်စီးတွင်လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်မီဆရာဝန်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလေ့ကျင့်သူတစ် ဦး ၏အကြံဥာဏ်ကိုရယူရန်အရေးကြီးသည်, ဒါကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင်ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာရှုပ်ထွေးမှုအန္တရာယ်ကိုမခံစားရပါ. သင်တစ် ဦး တည်းကိုမစတင်ခင်လက်ရှိလေ့ကျင့်ခန်းဆိုင်ကယ်ပေါ်တွင်လေ့ကျင့်နေသောလူများကိုလည်းမေးပါ. ဤဆောင်းပါး၏အဓိကအကြောင်းအရာသည် 'သင်၏သုတေသနကိုကောင်းစွာလုပ်ပါ'. ထိုနိယာမကိုလိုက်နာပါကကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသော ၀ ယ်မှုအတွေ့အကြုံရှိသင့်သည်. ဘတ်ဂျက်တိုင်းနှင့်ကိုက်ညီရန်စက်ဘီးစီးပါ
သင်ထင်သည်ထက်ဂေါက်သီးအ Swing တွင်ကြွက်သားများပိုမိုအသုံးပြုသည်
ဂေါက်သီးသမားအများစုသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏အောက်ပိုင်းရှိကြွက်သားများကိုဂေါက်သီးလွှဲ၌အသုံးပြုကြသည်ဟူသောအချက်ကိုသတိပြုမိသည်, များစွာသောလူသည်ဤကြွက်သားများသည်ပြီးပြည့်စုံသောဂေါက်သီးလွှဲ၏ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုအတွက်မည်မျှအရေးကြီးကြောင်းသတိမပြုမိကြပါ. ဂေါက်သီးလွှဲခြင်းတွင်အသုံးပြုသောကြွက်သားများကိုလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်အစွန်အဖျားထိပ်ဆုံးတွင်ထားခြင်းသည်မည်မျှအရေးကြီးသည်ကိုလူအများကပင်မသိရှိကြပါ. တကယ်တော့, ဒီအမှုကိုမပြုလျှင်, လေ့ကျင့်ခန်းမပြုလုပ်သူတစ် ဦး သည်ဂေါက်သီးသမား၏လမ်းပေါ်တွင်များစွာရှိနေသောကြောင့်မည်သူမဆိုဂိမ်းကိုပျော်မွေ့ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်. ဥပမာအားဖြင့်ဂေါက်သီးသမားများအကြားတွင်များသောအားဖြင့်ဂေါက်သီးဖြင့်ပိုမိုဆိုးရွားစေသည့်နောက်ကျောတွင်နာကျင်မှုဝေဒနာသည်ဖြစ်သည်။. ဒီနာကျင်မှုကိုအထူးသဖြင့်သင်တန်းကာလကြာမြင့်စွာပြုလုပ်ပြီးနောက်ထင်ရှားသည်. ဂေါက်သီးသမားသည်ဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းကိုမည်သို့တိုးတက်စေနိုင်သနည်း, တစ် ဦး တည်းထိုကဲ့သို့သောချင်နေကြတဲ့နှင့်အတူဂိမ်းခံစားမဆိုမျှော်လင့်ချက်ရှိသည်, persistent နာကျင်မှု? လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့်အသုံးပြုသောကြွက်သားများကိုအားဖြည့်ပေးခြင်းဖြင့်ဤပြproblemနာကိုအလွယ်တကူဖြေရှင်းနိုင်သည်. ရလဒ်မှာမည်သည့်ဂေါက်သီးသမား၏ဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းအပေါ်ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေမည့်ခံနိုင်ရည်မြင့်မားမှုအဆင့်လည်းရှိသည်။. သင်၏အိမ်၏သက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်အားကစားရုံတစ်ခုသို့မဟုတ်အထူးလေ့ကျင့်ခန်းintoရိယာသို့မသွားစရာမလိုဘဲဤအရာကိုရရှိရန်အလွန်ရိုးရှင်းသောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုအမှန်တကယ်ရှိသည်။. ဂေါက်သီးလွှဲရာတွင်အသုံးပြုသောကြွက်သားများသည်ခြေထောက်အောက်ပိုင်းရှိအချို့သောသူများနှင့်စုံလင်သောဂေါက်သီးလွှဲပြီးမြောက်ရန်အလွန်အရေးကြီးသောတံကောက်ကြောဒဏ်ရာကဲ့သို့သောများပါဝင်သည်. ဒါဟာမှန်ကန်သောလေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အတူပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အေးစက်မဟုတ်သောဂေါက်သီးလွှဲအတွက်အသုံးပြုကြွက်သားသောသက်သေပြအချက်ဖြစ်ပါသည်, များသောအားဖြင့်မှန်ကန်သောဂေါက်သီးရိုက်သည့်နည်းများကိုတုံ့ပြန်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ. လိုအပ်သောလုံလောက်သောခံနိုင်ရည်ရှိမှုနှင့်စွမ်းအင်တည်ငြိမ်မှုရရှိရန်အခြေအနေမရှိဘဲဂေါက်သီးလွှဲခြင်းတွင်အသုံးပြုသောကြွက်သားများကလိုအပ်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။. သင်ထင်သည်ထက်ဂေါက်သီးအ Swing တွင်ကြွက်သားများပိုမိုအသုံးပြုသည်